Top 10 App Store Optimization Tools To Improve Your App Ranking On Popular App Platform |. Ngwaọrụ Ngwa Ngwa Ngwa Ngwa Martech Zone
Na na 2.87 nde ngwa dị na Android Play Store na ihe karịrị 1.96 nde ngwa dị na iOS App Store, anyị agaghị ekwubiga okwu ókè ma ọ bụrụ na anyị kwuru na ahịa ngwa ahụ na-arịwanye elu. N'ụzọ ezi uche dị, ngwa gị anaghị asọmpi na ngwa ọzọ site na onye na-asọmpi gị n'otu niche mana yana ngwa sitere n'ofe ahịa na niches.
Ọ bụrụ n’iche, ị ga - achọ ihe abụọ iji mee ka ndị ọrụ gị jigide ngwa gị - uche ha na ebe nchekwa ha. Ebe ahia juputara na ngwa nile di iche iche, anyi choro ihe kariri ngwa ngba nke ngwa ngwa na usoro iji hu na anyi matara, budata ma jiri ya.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara njikarịcha nke ngwa na-apụghị izere ezere. Yiri njikarịcha njin ọchụchọ, ebe atumatu, ngwaọrụ, usoro, na usoro iji tinye websaịtị ma ọ bụ webpage pụtara na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ, Ngwa ụlọ ahịa ngwa (ASO) na-eme ka ngwa putara n’elu nsonaazụ ọchụchọ na ụlọ ahịa ngwa.
Kedu ihe njikarịcha Optlọ Ahịa App? (ASO)
ASO bu ngwakọta nke atumatu, akụrụngwa, usoro, na teknụzụ etinyere iji nyere ngwa mkpanaka gị aka ịkwado nke ọma ma nyochaa ogo ya n'ime nsonaazụ ọchụchọ App Store.
Otu n'ime isi ihe mere ngwa ahịa kachasị mma bụ ihe a na-apụghị izere ezere bụ n'ihi na ọ dị nso 70% nke ndị ọrụ na-echekwa ngwa na-eji search nhọrọ anya n'ihi na ha họọrọ ngwa ma ọ bụ ngwa dabeere na ngwọta. Site na 65% nke nsonaazụ ọchụchọ na-agbanwe, ngwa gị kwesịrị ịdị n'elu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmatakwu ndị ọrụ, nweta ego, gbanwee dị ka ika, ma mee karịa.
Iji nyere gị aka imeta ihe ndị a, anyị nọ ebe njiri mara ngwa ahịa ngwa ngwa pụrụ iche, uru ya na 10 ga-enwerịrị ngwaọrụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ngwa, ụlọ ọrụ mmepe ngwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ASO, edemede a ga-eme ka ị mata ụfọdụ ngwa njikarịcha ngwa ngwa.
Ka anyi bido mana tupu nke a, lee ụfọdụ uru ngwa ngwa nke njikarịcha ngwa ahịa.
Uru nke Storelọ Ahịa imlọ Ahịa
Otu uru dị mkpa n'iji ngwa na usoro ASO bụ na ị melite ọhụhụ nke ngwa gị na ngwa ngwa ngwa ya. Ihe obula toputara nchoputa choputara na o bu ihe kwesiri ekwenye. E wezụga nke a, njikarịcha ngwa ahịa ngwa ahịa na-enye gị uru ndị a:
Site na imepụta ọnụnọ Storelọ Ahịa andlọ Ahịa gị ma melite ogo gị, ASO:
Na-akwalite mgbakwunye ndị ọzọ maka ngwa mkpanaka gị.
-Enyere gị aka ụgbọala ọzọ na-ngwa revenue.
Na-ebelata ego gị iji nweta ndị ọrụ ngwa ọhụụ.
Mma brand mmata, ọbụna ma ọ bụrụ na ha adịghị wụnye ya na nke mbụ.
Na-akwalite nnweta na ndị ọrụ dị mkpa, ndị dị elu nke ga-eme ka ngwa gị rụọ ọrụ zuru oke. Ndị ọrụ dị otu a yikarịrị ka ha ga-eji njirimara gị dị elu, ụdị ndenye aha na ndị ọzọ.
Ngwaọrụ ASO kacha ewu ewu iji melite ogo ogo
Nghọta ahịa zuru ezu bụ ihe ịchọrọ iji mee ka ngwa gị gaa na nsonaazụ ọchụchọ na Ngwa Annie na-eme nke ahụ. O nwere ike bụrụ ebe nchekwa data kachasị, App Annie na-enye gị nghọta miri emi na niche ahịa ị họọrọ, ndị asọmpi gị, ngwa ndị yiri ya na ndị ọzọ.
Ngwa ojiji ojiji na akuko
Budata ọnụ ọgụgụ
Real-oge ngwa ụlọ ahịa nsuso na nghọta na n'elu chaatị dị iche iche, ngwa nkọwa, n'usoro akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ
Sara mbara dashboard
Akụkụ kachasị mma banyere App Annie bụ na ọ naghị enye ndenye aha ma ọ bụ ụdị ọnụahịa. Ọrụ nweta ahaziri ruturu dabere na ha mkpa.
Otu n'ime ngwaọrụ nyocha kachasị mma, Ụlọ Sensọ na-enye gị nghọta maka ụfọdụ mkpụrụokwu ndị asọmpi gị na-eji mana ị na-efu efu. Ọ na - enyere gị aka ịtụgharị egwu gaa na ohere ma mee ka ngwa gị na ntanetị nọrọ na ụlọ ahịa.
Onye nhazi ederede, onye nyocha na njikarịcha
App ojiji nsuso
Isiokwu ntụgharị na ndị ọzọ
Sensor Tower na-enye ndi di iche-iche onu ahia ya na onu ahia 3 na ngwugwu obere oru 2. Site na ọnụahịa bido na $ 79 kwa ọnwa gaa na nkwupụta ihu igwe dị elu, ndị ọrụ nwere ike ịkwado atụmatụ ha ma kwụọ ụgwọ ya.
Ezubere maka nnukwu ahụmịhe, ndị Ngwa tweak awade ọtụtụ akụkọ na localization atụmatụ. Site na mkpesa a na-agwakọta site na mba 60 gafee usoro dị iche iche na-akpali akpali, nke a bụ ngwa nrọ ngwa ahịa. Agbanyeghị, ngwa ahụ dị maka ndị ọrụ iOS.
Nyocha onye asọmpi
Atụmatụ ego na ndị ọzọ
Achọpụtara ụbọchị n'efu n'efu nke ụbọchị 7 site na App Tweak maka ndị ọrụ ọhụụ ka ha jiri ngwa ahụ wee chọpụta ike ya. Ozugbo nke a mechara, ha nwere ike ịhọrọ atụmatụ mbido ($ 69 kwa ọnwa) ma ọ bụ họrọ atụmatụ Guru ma ọ bụ Ike na $ 299 na $ 599 kwa ọnwa.
Mobile ọgụgụ isi bụ USP nke Ntinye, nke na-enye ndị mmepe ngwa na ndị nwe azụmaahịa aka inweta nghọta dị oke mkpa nke arụmọrụ yana arụmọrụ sitere na metrik mkpanaka na ngwaahịa, ọrịre, usoro ị nweta ego, ojiji, na ndị ọzọ iji mee mkpebi nke data.
Ihe ngosi ngosi nke isi
Ngwa nyocha ahịa
Kọ ma ọ bụ mee atụmatụ ndị na-azụ ahịa
Ojiji nke ụlọ ọrụ ọha na ndị ọzọ
Ọnụahịa ngwa ahụ na-amalite na $ 50 kwa ọnwa, ebe azụmaahịa nwere ike iji ihe ruru ngwa ise.
A ìgwè mmadụ mmasị, na arụ ọrụ ekwentị ngwa awade a nso nke pụrụ iche atụmatụ ọkọnọ n'elu ihe magburu onwe UI. Ihe njiri mara nke ngwa a bụ ike ịtụle arụmọrụ ngwa maka otu mkpụrụokwu.
Asọmpi isiokwu ndorondoro
Advanced akụkọ na ndị ọzọ
Yiri App Tweak, ndị ọrụ na-enweta nnwale ụbọchị n'efu nke 7 mgbe ha debanyere aha. Zipu nke a, ha nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 69, $ 599 ma ọ bụ $ 499 kwa ọnwa maka Starter, Winner na Premium Premium n’otu n’otu.
Maka ndị gị na anya na-achọ ịlele ngwa gị na ọhụhụ, Ihe nketa bụ ezigbo ASO gị. Ọ na-enye nghọta zuru ezu banyere iji ngwa gị yana oge ole ndị ọrụ gị na-ele vidiyo vidiyo na mgbasa ozi iji nyere gị aka ịghọta ndị ahịa gị nke ọma.
Ruo ihe dị iche iche dị iche iche dị 30 iji chọpụta ma nweta nghọta site na
A / B ule
Atụmatụ sitere na ndị Splitmetrics nọ na ụlọ ochie
Nyocha nke mbụ maka ngwa
Ọrụ ịrụ ọrụ megide ndị asọmpi gị na ndị ọzọ
Ngwaọrụ chọrọ ka ị were ngosi wee nweta ahaziri ahaziri dabere na mkpa gị.
Ọ bụrụ na isi ihe ị na-elekwasị anya bụ na ịchọta ndị ọrụ maka ngwa gị, Tinye bụ ihe kachasị mma maka njikarịcha ngwa nyocha ị ga-enweta. Ndị mmepe nke ngwa ọrụ a na-ekwu na ngwa gị nwere ike ịnweta mmụba 490% na ntinye ngwa ngwa yana 5X mmụba na mmetụta izu ụka na ụlọ ahịa ngwa.
Na ngwa ahụ, ị ​​nwere ike soro ụfọdụ usoro arụmọrụ kachasị mkpa dịka mgbanwe ọnọdụ ọnọdụ isiokwu, ọnụego mgbanwe, nbudata ma lelee usoro njikarịcha ngwa nke ndị asọmpi gị iji gbanwee nke gị. I nwekwara ike ịchọta ngwa gị site na iji atụmatụ ntụgharị asụsụ nke akụrụngwa na-enye.
Ndepụta arụmọrụ na ụlọ ahịa
Akpaaka nke isiokwu nnyocha
Ntụle asọmpi na nyocha
ASO mata zigara email na slack
Benchmarks maka mgbanwe ọnụego na ndị ọzọ
Maka ụlọ ọrụ, ọnụahịa na-amalite na $ 55 kwa ọnwa site na $ 111 kwa ọnwa na atụmatụ ọnụahịa ahaziri maka mbipụta ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na Splitmetrics bụ maka ihe ọhụhụ na-arụ ọrụ, Mlọ ahịaMaven bụ banyere ịmepụta mgbanwe ọnụego. Site na iji usoro sayensi na data achọta iji nyochaa omume ndị ahịa, ọ na-enye gị ọtụtụ nnwale, nnwale na nyocha ngwaọrụ na usoro iji hụ na ndị ọbịa gị tọghatara ndị ọrụ.
StoreMaven ọbụna na-ekenye ọnụ ọgụgụ na mmejuputa ya emeela ka mmụba 24% na ọnụego ntụgharị, 57% belata na nnweta onye ọrụ yana gburugburu 34% mmụba na njikọ aka.
Nnwale A / B
Ebumnuche njikarịcha nke onwe na atụmatụ
Nkwupụta ule na nyocha nsonaazụ
Nnyocha asọmpi na ndị ọzọ
StoreMaven chọrọ ka ị were ngosi wee nweta ahaziri ahaziri dabere na mkpa gị.
Ntinye Ezubere iji dozie ọdịiche dị n'etiti njikọta ngwa na nghọta njirimara onye ọrụ. Ewubere ya n'echiche ntọala na ndị mmepe ngwa na ụlọ ọrụ anaghị enweta ezigbo ohere nzaghachi ndị ọrụ na usoro njikọ aka iji bulie ngwa ha maka arụmọrụ na ọhụhụ. Apptentive bụ ebe a iji weta ihe niile ọnụ.
Real-oge nzaghachi ohere
Nyochaa ahụike ngwa, nghọta ndị ahịa na ndị ọzọ
Nkenke ezubere iche na arụmọrụ n'ihe na ndị ọzọ
ASOdesk na-enye gị nghọta zuru ezu banyere ajụjụ ndị ọrụ gị na ndị na-ege gị ntị na-eji iji nweta ngwa ndị yiri nke gị n'ahịa. E wezụga nke ahụ, ọ na-agwakwa gị isiokwu ndị ngwa ngwa nke ndị na-asọ mpi na-agbago maka yana ozi ndị ọzọ gbasara isiokwu dị ala. N'ikpeazụ, ngwa ahụ na-enyekwa gị ozi dị oke egwu banyere arụmọrụ nke usoro ASO gị.
Nchịkọta isiokwu, onye nyocha na onye nyocha
Akụkọ na ndekọ ọnụ ọgụgụ
Nzaghachi na nlekota nyocha
Asọmpi Keywords nyocha na ndị ọzọ
Enwere atụmatụ ọnụahịa abụọ dị - otu maka mmalite na obere azụmaahịa na nke ọzọ maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ọnụahịa maka mmalite na-amalite site na $ 24 kwa ọnwa wee gaa n'ụzọ niile ruo $ 118. Maka ụlọ ọrụ, n'aka nke ọzọ, ọnụahịa na-amalite na $ 126 kwa ọnwa ruo $ 416 kwa ọnwa.
Yabụ, ndị a bụ ngwaọrụ ndị kachasị ewu ewu ma dị irè iji bulie ọhụhụ nke ngwa gị na ngwa ngwa. Site na ngwaọrụ ndị dị n'aka, ị nwere ike ịme ụzọ maka visibiliti organic, nnweta nnweta ndị ọrụ, belata ego-kwa-ndu, na ndị ọzọ. Ugbu a, i nwere ike iji ngwá ọrụ na n'out oge na-arụ ọrụ na optimizing arụmọrụ nke gị ngwa n'ihi na ya functionalities nakwa. Y’oburu n’inyocha ihe ndi ozo iji zuta ngwa mkpanaka gi mgbe a ka ntuziaka zuru oke:
Ndụmọdụ iji zụọ ahịa ekwentị gị
Tags: ngwa igwengwa annieụlọ ahịa ngwanjikarịcha ngwa ahịaogo ụlọ ahịangwa tweakngwaapụl ngwaapple ụlọ ahịanke nwere mmasịngwaasoasodeskgooglegoogle play storeesi azụ ahịa ekwentị gịiosios ngwaarụ ọrụ ekwentịmobile ngwa ahịaekwentị mkpanaaka ngwa ahịamobile App Store ogoụlọ elu ihe mmetụtakewaraụlọ ahịa
Scratchpad Iwu: Thezọ kachasị ọsọ iji nweta ma melite Salesforce Site na App Web ọ bụla